I-Biographie ye-Victorian Novelist uCharles Dickens
Umbhali waseBrithani uCharles Dickens wayengumdlali wezona zintandokazi waseVictoria , kwaye nanamhlanje uhlala enqabileyo kwiincwadi zaseBrithani. Wabhala iincwadi ngoku ziqwalasela iiclassics, kuquka uDavide Copperfield , Oliver Twist , iTale of Two Cities , kunye neLindelo elindelekileyo .
UDicken wafumana udumo kuqala ngokudala abalinganiswa bee-comic, njengeyunivesithi yakhe yokuqala, i -Pickwick Papers . Kodwa kamva ekugqibeleni kwakhe waba neengxaki ezinzulu, eziphefumlelwe ubunzima obunzima abhekana nazo ebuntwaneni kunye nokubandakanyeka kwakhe kwiimeko ezahlukahlukeneyo zentlalo ezinxulumene neengxaki zezoqoqosho kwiBritish yaseBrithani.
Ubomi bokuqala kunye nokuQala komsebenzi wakhe
UCharles Dickens wazalelwa ngoFebruwari 7, 1812 ePortsea (ngoku iyingxenye yePortsmouth), eNgilandi. Uyise wayenomsebenzi osebenza njengobhala wenkokhelo ye-British Navy, kwaye intsapho kaDickens, ngokwemigangatho yosuku, yayingayinandipha ubomi obukhululekile. Kodwa indlela yokuchitha uyise yayibangela ukuba kube nzima kwiingxaki zemali.
Intsapho kaDickens yafudukela eLondon, kwaye xa uCharles eneminyaka eyi-12 iindleko zikayise zaphuma ekulawuleni. Xa uyise wathunyelwa entolongweni yetyala leMarshalsea, uCharles waphoqeleka ukuba athathe umsebenzi kwiprani eyenza i-polise yesikhumba, eyaziwa ngokuba ngumnyama.
Ubomi kwimveliso ebomnyama ye-12 eneminyaka eli-12 ubudala. Waziva ehlazekile kwaye eneentloni, kwaye unyaka okanye njalo wayichitha iibhile kwiimbiza zokumnyama zaziba nefuthe elibi ebomini bakhe.
Abantwana abafakwe kwiimeko eziyingozi bahlala bebhalela kwimibhalo yakhe. U-Dickens wayenobunzima bokufumana umsebenzi ophazamisayo kuloo ncinane, nangona kubonakala ukuba wayekade exelele umfazi kunye nomhlobo wakhe osondeleyo malunga namava. Abalandeli bakhe abangenakubalwa bengazi ukuba ezinye zeentlungu ezivezwe ekubhaliweyo kwakhe zazisuka ebuntwaneni bakhe.
Xa uyise wayenako ukuphuma ejele, uCharles Dickens wakwazi ukuqhubeka nokufunda kwakhe esikolweni. Kodwa waphoqeleka ukuthatha umsebenzi njengenkwenkwe yinkwenkwe eneminyaka eyi-15.
Ngomntwana wakhe osemva sele efunde ukunyanzela nokubeka umsebenzi njengomnyatheli kwiinkantolo zaseLondon. Kwaye ngasekuqaleni kwe- 1830 waqala ukubika ngamaphephandaba amabini e-London.
Umsebenzi wokuqala weCharles Dickens
UDickens unqwenela ukuba aphule kumaphephandaba aze abe ngumlobi ozimeleyo, kwaye waqala ukubhala iimpawu zokuphila eLondon. Ngowe-1833 waqala ukuwahambisa kumagazini, INyanga.
Kamva wayeza khumbula ukuba wangenisa njani incwadi yakhe yokuqala, athi "yahlahla ngokuhlwaya ngokuhlwa ngokuhlwa, ngokukwesaba nokuthuthumela, ebhokisini lebhokisi elimnyama, kwiofisi elimnyama, enkundleni yamnyama eFleet Street."
Xa isicatshulwa ebhaliweyo, esithi "Ukutya okudliwayo kwiPoplar Walk" kubonakala kukushicilelwe, uDickens wayevuya kakhulu. Umzobo wawubonakala ungenawo umgca, kodwa ngokukhawuleza waqala ukupapasha izinto ngegama lomnxeba "uBoz."
Amaqhinga anengqiqo neengqiqo uDickens abhala wabonwa, kwaye wanikezwa ithuba lokubaqokelela encwadini. Iingqungquthela zikaBoz zavela ekuqaleni kwangoko ngo-1836, xa uDickens wayesanda kuvula iminyaka engama-24. Exhamle ngempumelelo kwincwadi yakhe yokuqala, watshata noCatherine Hogarth, intombi yomhleli wephephandaba. Kwaye wahlala ebomini obutsha njengendoda yentsapho kunye nomlobi.
UCharles Dickens uzuze iGama elikhulu njengeNvelisi
Incwadi yokuqala eyapapashwa nguCharles Dickens, i- Sketches By Boz yayidume ngokwaneleyo ukuba ummemezeli wayithumelele uchungechunge lwesibini, owabonakala ngo-1837. Kwakhona uDickens wayeza kubhala umbhalo ukuze ahambisane nemifanekiso yemifanekiso, kwaye loo projekthi yaba yincwadi yakhe yokuqala .
Iimvalelo ezihambelanayo zikaSamuel Pickwick kunye namaqabane akhe zanyatheliswa kwifomathi yee-serial ngo-1836 no-1837 phantsi kwesihloko sokuqala, i -Posthumous Papers ye-Pickwick Club . Izavenge zeveliveli zaziwa kakhulu kangangokuthi uDickens wayenenkontileka ukuba abhale enye inveli, u- Oliver Twist
UDickens uthathe umsebenzi wokuhlela iphephancwadi, iBentley's Miscellany, kwaye ngoFebruwari 1837 izitolimende zika- Oliver Twist zaqala ukuvela khona.
I-Dickens yaba negalelo ngokugqithiseleyo emva kwee-1830s
Ngomdlalo omangalisayo wokubhala, uDickens, kangangokuba uninzi lwama-1837, ngokwenene wabhala iiPopyick Papers kunye no- Oliver Twist . Izitolimende zenyanga nganye zeelveli nganye zazingamazwi angaba ngu-7 500, kwaye uDickens uza kuchitha iiveki ezimbini nganye ngenyanga esebenza omnye ngaphambi kokutshintshela kwenye.
UDickens ugcine iirekhodi zokubhala. UNicholas Nickleby wabhalwa ngo-1839, kunye ne -Old Old Curiosity Shop ngo-1841. Ukongeza kwimiveli, uDickens wayekhangela amanqaku amaphephancwadi.
Ukubhalwa kwakhe kwaba yinto ethandwa kakhulu. Wayekwazi ukudala abalinganiswa abaphawulekayo, kwaye ukubhala kwakhe kudla ngokudibanisa kunye nezinto ezibuhlungu. Uvelwano lwakhe ngabantu abasebenzayo kunye nabo babanjwe kwiimeko ezibuhlungu benza abafundi baziva banxulumene naye.
Yaye njengoko iincwadi zakhe zivela kwifom ye-serial, ukufundwa koluntu kwakusoloko kugxininiswa. Ukuthandwa kukaDickens kwasasazeka eMelika, kwaye kwakukho amabali athethwa malunga nendlela abantu baseMelika babingelela ngayo iinqanawa zaseBrithani kwii-docks eNew York ukufumana oko kwenzeke ngokulandelayo kwelinye leenveli.
UDickens wavakashela eMelika ngowe-1842
Ukuxhaswa kwigama lakhe lamazwe ngamazwe, uDickens watyelela i-United States ngo-1842, xa eneminyaka engama-30 ubudala. Uluntu lwaseMerika lwalulangazelela ukumbulisa, kwaye waphathwa kwiimibutho kunye nemibhiyozo ngexesha lokuhamba kwakhe.
ENew England eDickens watyelela iifemu zaseLowell, eMassachusetts, naseNew York City wathatyathwa waya kwiiNqaku eziThombisayo , isiqhelo esaziwayo nesiyingozi kwi-East Side Side. Kwakukho ukuthetha ngaye ngokutyelela eMzantsi, kodwa njengoko wayethuswa yingcamango yobukhoboka akazange ahambe eningizimu yeVirginia.
Emva kokubuyela eNgilani, uDickens wabhala ingxelo yeendlela zakhe zaseMerika ezacaphukisa abaninzi baseMerika.
UDickens Wabhala iiNveveli ezinzulu kwii-1840
Ngowe-1842 uDickens wabhala enye incwadi, uBaraby Rudge . Ngomnyaka olandelayo, ngelixa bebhala inqaku likaMartin Chuzzlewit , uDickens watyelela kwisixeko soshishino saseManchester, eNgilandi. Wayethetha ngokuqokelela abasebenzi, kwaye kamva wathatha uhambo olude waza waqala ukucinga ngokubhala incwadi yeKrisimesi eyayiza kubhikisha ngokungafani koqoqosho olungalinganiyo e-Victorian eNgilani.
UDickens wanyathelisa iCarimesi yeKrisimesi ngoDisemba 1843, kwaye yaba yinto emininzi yakhe yokusebenza.
UDickens wahamba eYurophu unyaka kwiminyaka ye- 1840 , waza wabuyela eNgilani ukuba abhale iirekhodi ezininzi:
1848 uDombey noNyana
1850 uDavid Copperfield
1854 amaxesha anzima
Ngasekupheleni kwe- 1850 , uDickens waqalisa ukuchitha ixesha elongezelelweyo ekufundeni esidlangalaleni. Ingeniso yakhe yayininzi, kodwa kunjalo neendleko, kwaye wayesolokoyika ukuba wayeza kuphinda abuyele ebuhlwini obuthathaka.
Ubutyebi bukaCharles Dickens bunyamezela
Epic / Getty Izithombe
UCharles Dickens, ebudeni obuphakathi, wabonakala ephezulu kwihlabathi. Wayekwazi ukuhamba njengoko wayenqwenela, kwaye wachitha iifesi e-Italy. Ngasekupheleni kwe- 1850 wathenga indlu, uGal's Hill, eyayiqala ukuyibona kwaye yamnceda njengomntwana.
Naphezu kwempumelelo yakhe yehlabathi, uDickens wayejongene neengxaki. Yena nomkakhe babenentsapho enkulu yabantwana abalishumi, kodwa umtshato wawuhlala uphazamiseka. Kwaye ngo-1858, xa uDickens wayeneminyaka engama-46, ubunzima bakhe buba yinto ehlaselayo.
Washiya umfazi wakhe waza waqala into eyimfihlo kunye nomdlali we-actress, u-Ellen "Nelly" uTernan, owayeneminyaka eli-19 ubudala. Amahemuhemu ngobomi bakhe abucala. Kwaye ngokuchasene nabacebisi, uDickens wabhala incwadi eyazivikela eyanyatheliswa kumaphephandaba eNew York naseLondon.
Kwiminyaka eyishumi edlulileyo yobomi bukaDicken wayedla ngokusuka ebantwaneni bakhe, kwaye akangekho ngokufanelekileyo nabahlobo bamandulo.
ImiSebenzi Yomsebenzi kaCharles Dickens yamenza wamkhathazeka kakhulu
UDickens wayesoloko esichukumisa ukuba asebenze kanzima, ebeka ixesha elikhulu xa ebhala. Xa wayeseminyakeni engama-50 ubudala wabonakala ekhulile kakhulu, kwaye wayekhathazekile ngokubonakala kwakhe, wayevame ukuphepha ukuthwebula isithombe.
Naphezu kokubonakala kwakhe okukrakra kunye nenani leengxaki zempilo, uDickens waqhubeka ebhala. Iimveli zakhe zangaphambili zilandelayo:
1859 I-Tale yeZixeko ezimbini
1861 Ukulindela okukhulu
1865 Umhlobo wethu wobudlelwano
1870 Imfihlakalo kaEdwin Drood (engapheli ngexesha lokufa kwakhe)
Naphezu kweengxaki zakhe, uDickens waqala ukubonakala ebantwini ngokuqhelekileyo kwiminyaka ye- 1860 , enikela ukufundwa kwimisebenzi yakhe. Wayesoloko ebenomdla kwi-theater, kwaye xa wayesemncinci wayesicinga ukuba ngumdlali. Ukufunda kwakhe kwadunyiswa njengemidlalo ephawulekayo, njengoko uDickens eya kwenza intetho yabalinganiswa bakhe.
U-Dickens Ubuyela kwi-American With Tour of Triumphant
Nangona wayengazange athabathe uhambo lwakhe lwaseMelika ngowe-1842, wabuyela ngasekupheleni kwe-1867. Waphinda wamukelwa ngokufudumele, kwaye izihlwele ezinkulu zaza zaza zabonakala. Wachukumisa i-East Coast ye-United States iinyanga ezintlanu.
Wabuyela eNgilani ediniwe, kodwa waqala ukutyelela ezinye iindwendwe zokufunda. Nangona impilo yakhe yayingaphumeleli, iindwendwe ziye zenza imali, kwaye waziphoqa ukuba aqhubeke ebonakala.
U-Dickens uceba intsha entsha yokupapashwa kwifom ye serial. I-Mystery ye-Edwin Drood yaqala ukuvela ngo-Apreli 1870. NgoJuni 8, 1870, uDickens wasebenzisa intambama esebenzayo kwinveli ngaphambi kokuba ahlupheke ngesantya. Wafa ngosuku olulandelayo.
Umngcwabo u-Dickens wawunesizotha, owadunyiswayo, ngokubhekiselele kwinqaku leNew York Times ngelo xesha, njengoko lihambisana "nomoya wentando yesininzi." Kodwa wanikwa udumo oluphakamileyo, nangona kunjalo, njengoko wangcwatywa kwiNgqungquthela yase-Westminster Abbey, kufuphi namanye amanani abhaliweyo kuquka uGeffrey Chaucer , uEdmund Spenser kunye noDkt. Samuel Johnson.
Ilifa likaCharles Dickens
Ukubaluleka kukaCharles Dickens kwiincwadi zesiNgesi kuyaqhubeka kakhulu. Iincwadi zakhe azizange zishicilelwe, kwaye zifundwa ngokubanzi namhlanje.
Kwaye njengoko imisebenzi kaDickens iboleka ekuchazeni ngokukrakra, imidlalo, iinkqubo zethelevishini, kunye neefilimu ezisekelwe kwimiqulu kaDickens iyaqhubeka ibonakala. Enyanisweni, iincwadi ezipheleleyo zibhaliswe kwimiba kaDicken eyenziwe kwisikrini.
Kwaye njengokuba umhlaba ubonisa iminyaka engu-200 yokuzalwa kwakhe, kukho ukukhunjulwa okuninzi kukaCharles Dickens obanjelwe eBrithani, eMelika nakwezinye iintlanga.
UJames Gordon uBennett
I-Complete List of Books nguStephanie Meyer
I-Gene Wilder: iComic, iLagend-noMbhali
I-Complete Nora Roberts Book List
Intando yeninzi Ingxabano kuHerodotus
I-Toronto Blue Jays Yonke ixesha lokuQala
Indlela yokudibanisa 'Ukuqala' (ukuQala, Qala, Qala)
Amandla eNdawo - i-Architecture, iMfazwe, kunye neMemori
I-Ducati 1098S Ukubuyiselwa kweMidlalo ye-2008